Boorsada Nolosha, Iskuulka iyo Shaqada ： BP 001, Shiinaha Boorsada Nolosha, Iskuulka iyo Shaqada
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>boorsooyinka
Boorsada nolosha, dugsiga iyo shaqada ： BP 001
ganaax waa dhammeystirna: qurxinta, midabka jilicsan ee qurxan, jilicsan oo jilicsan oo leh biro dahab ah oo dabacsan. Qeybaha gudaha waxaa si buuxda loogu xardhay qaanad daabacan oo xaddidan oo polyester ah si ay u istaagto adeegsiga maalinlaha ah. Qalabka gadaasha gadaal ayaa si buuxda loogu dhejiyaa in la hayo oo la ilaaliyo laptop-kaaga.
Dhaqdhaqaaqa casriga ah: Tani Kenneth Cole AKHRISKA sophie nylon 15. 0-Boorsada gudaha ee Laptop-ka waxaa ku jira jeebado badan oo ay ka kooban yihiin iyo qaybo badan oo loogu talagalay in lagu diyaariyo dhammaan waxyaabaha aasaaska u ah safarkaaga. Tilmaamayaasha gacanta si fudud looga qaban karo. Gadaal banaanka ah wuxuu kuxiraa qeybta dambe ee mesh, tunnel trolley si ay ugu xirnaato inta badan shandadaha toosan ee toosan ee gacmaha lagu qaado, iyo isku hagaajin karo, garbaha padded.
Qaybaha abaabulan: qolka fadhiga hore ee gusset wuxuu leeyahay jaakad RFID oo ilaalinaysa jeebka qalabka, jeebka dhejiska dhererka oo buuxa, qalin loox ah, iyo jeebka jeebka sare ee furan. Qolka weyn ee hore waxaa ku jira jeebka shaashad jeexan, laba jeebka furan, iyo qolka lagu haysto alaabooyinka kale ee loo baahan yahay. Wejiga kore ee wejiga kore wuxuu kuxiran yahay jeebka qarsoon ee jeebka lagu kaydiyo si loo xafido loona ilaaliyo waxyaabaha qiimaha leh.
Phu Ly Bao Co. Ltd (PLB) Cinwaanka Ingiriisiga: 71 - 73 Street No. 1B, Binh Tri Dong B, Degmada Binh Tan, Ho Chi Minh City, Vietnam Nam
0777 969 228 Levitt (Mr) - 0909350418 Maajo (Ms)